ब्ल्याकजेक ओड्स - UK 2021 ✅ बारे मा
Home » क्यासिनो खेलहरू » ब्ल्याकज्याक » ब्ल्याकजेक ओड्स
ब्ल्याकजेकमा संरचना निर्भर रणनीति
एक डिलरको १० को बिरूद्ध १ Hand हातको मूल्य
एक हात व्यापारी को4को तुलनामा हात मूल्य 12
एक डिलरको १० को बिरूद्ध हातको मूल्य १
हात वा खेलाडी अन्तर्क्रिया रणनीति
क्यासिनो कम्पासको प्रयोग
तपाईंलाई क्यासिनो द्वारा पहिले मूल्या be्कन गर्नुपर्छ
कम्पास पोइन्टहरू कसरी गणना गरिन्छ?
यहाँ कसरी तपाईं क्यासिनोबाट थप कम्पस संकलन गर्न सक्नुहुन्छ
क्यासिनो कूपनको प्रयोग
घाटा छूट को लाभ लिनुहोस्
सबैजना घरको किनारा कम गर्न र ब्ल्याकजेकको खेलमा जित्ने चाहन्छन्। तर तपाइँ यस खेलमा कसरी जीत गर्नुहुन्छ, र प्रयोग गर्नको लागि सबैभन्दा उचित रणनीति के हो? ठीक छ, मानक रणनीतिहरू मध्ये एक जुन प्रयोग गर्न सकिन्छ पहिले हातको कुल मूल्यलाई विचार गर्नु, व्यक्तिगत कार्डहरूलाई विचार नगरी। यसलाई ब्ल्याकजेक खेल्नमा पारंपरिक दृष्टिकोणका रूपमा लिइन्छ र यो धेरैले स्वीकारेका र खेलेको हो।
जबकि खेल खेल यो दृष्टिकोण काम गर्दछ, तपाईं दिमागमा राख्नु पर्छ कि तपाईं अझै आफ्नो संभावना सुधार गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईं ‘अधिक सटीक’ हुन सक्छ वा यदि तपाईं पनि हात मा व्यक्तिगत कार्ड विचार हुनेछ।
ब्ल्याकज्याक टेबलमा तपाइँको अवसरहरू सुधार गर्न मद्दतको लागि, हामीले केहि आधारभूत परिदृश्यहरू र उचित संरचना-निर्भर खेल सूचीबद्ध गरेका छौं जुन तपाईं आफ्नो अवसरहरू सुधार गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईं यो परिदृश्यमा कसरी खेल्नुहुन्छ? यदि आत्मसमर्पण प्रस्ताव गरिएको छ भने, तपाईको सबै भन्दा राम्रो चाल हो कि यदि तपाई डिलर १० को बिरूद्ध लड्दै हुनुहुन्छ भने 8-8 बाहेक तपाईको दुई-कार्ड कडा 16 को समर्पण गर्नु हो।
यहाँ सामान्य नियम तपाईको खडा हुनको लागि हो यदि हातले तीन वा बढी कार्ड राखीएको छ। यसको कारण यो हो कि तपाईंको हातमा एक वा बढी साना-मूल्य कार्डहरू प्रस्तुत गर्दछ जुन अब प्ले गरिएको कार्डको डेकमा फेला पर्दैन। यी कार्डहरू हुन् जुन तपाईंले हात मूल्य बढाउनु पर्छ।
र यी कार्डहरू तपाईको हातमा अवतरण भएकोले यसको मतलव तपाईको पक्षमा बदलियो र यसलाई हिर्काउनु भन्दा पनि तार्किक हुनेछ। यो सिफारिस पनि ब्ल्याकज्याक ब्लूबुक II को फ्रेड रेन्जे जस्तै केही विशेषज्ञहरु द्वारा प्रतिध्वनित छ जसले सिफारिश गर्दछ कि यदि तपाई डिलर १० को बिरुद्ध उठ्नु भयो भने तपाईले खडा हुनु पर्छ र तपाईको १ 16 को or वा5छ।
के हुन्छ यदि तपाई १२ को मूल्यको एक हात उठाउनु भएको छ र डिलरको अप-कार्ड S छ S17 को साथको खेलमा? यदि यो मामला हो भने, त्यसो भए तपाईले पहिले हातको रचनालाई बुझ्नु पर्छ। परम्परागत रणनीति जहाँ कुल मूल्य महत्व, सिफारिस खडा छ।
तर यो भन्दा सजिलो भनियो किनकि १२ को हात मूल्यको चार फरक फरक हुन सक्छ, जस्तै -3 –3, १०-२, र -4-।। यदि मामलामा हातको रचना १०-२ छ भने, त्यसो भए तपाईंको उत्तम चासोको लागि of को पोस्टकार्ड बिरूद्ध हिट गर्नु हो। तर यदि हातले9–3, -4- or वा -5-। फिचर गर्दछ, तपाईको अडानको लागि यो सिफारिश गरिएको छ।
यदि तपाइँसँग छ वा कम डेक खेल्ने कार्डको साथ सामना गर्नुपर्‍यो भने, यो उत्तम छ कि तपाईले १२ को हात मुल्यमा १०-२ को साथ हिट गर्नु राम्रो हुन्छ जब डिलर4सँग खेल्दा। तर आठ-डेक खेलमा, विशेषज्ञहरूले तपाईंलाई खडा हुन सल्लाह दिन्छन्।
परम्परागत रणनीति एक समर्पण को उपयोग गर्न को लागी हो यदि तपाईं क्यासिनो डीलरको १० पोष्टकार्ड संग खेल्दै हुनुहुन्छ। तर यदि तपाईले हातको रचना पहिचान गर्नु भयो भने तपाईले विजयी हुने सम्भावना बढाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं एक 8-7 संग एक 15 होल्डिंग गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसोभए यो बुद्धिमानी हो कि यदि तपाईं आत्मसमर्पणको सट्टा हिट गर्न सक्नुहुनेछ, कम्तिमा7डेकहरूमा समर्पण बाहेक।
यो ब्ल्याकजेकमा तुलनात्मक रूपमा नयाँ रणनीति हो जुन फ्रेड रेन्जी, लोकप्रिय र ब्ल्याकजेक ब्लूबुक II का लेखकले लोकप्रिय बनाए। यो शीर्षक ब्ल्याकजेक ईन्साइडर ई-न्यूजलेटर जस्ता अन्य प्रकाशनहरू र कार्यहरूमा पनि खोजी गरिएको छ।
हात अन्तरक्रिया अर्को रणनीति हो जुन खेलाडीहरूले घरको किनारा कम गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो एक रणनीति हो कि मौन वा डरपोक खेलाडीका लागि काम गर्ने छैन किनकि तपाईंले अन्य चालकको हातमा निर्भर रहेका धेरै चाल र कलहरू गर्नुपर्नेछ।
यसमा टेबमा रहेका अन्य खेलाडीहरूलाई तपाइँको हातमा एक शर्त बनाउन पनि समावेश छ। यो दृष्टिकोण फरक तरीकाले कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। उदाहरण को लागी, तपाईले भाग लिन सक्नुहुनेछ वा सबै खेलाडीको आकर्षक डबल वा तपाईंको गरीब स्प्लिटको अंश दिनुहोस्।
रणनीति कसरी काम गर्छ भनेर अझ राम्ररी बुझ्न तपाईं तलका उदाहरणहरू सन्दर्भ गर्न सक्नुहुनेछ।
उदाहरणको लागि भन्नुहोस् तपाईको छेउमा विराजमान खेलाडीले २० डलर शर्त बनाएको थियो र -4–4 को साथ एक हात दिइएको थियो, पोष्टकार्डको लागि १०को साथ। यहाँ बनाउन सकिने सब भन्दा तार्किक दृष्टिकोण भनेको दुबै तल झार्नु वा ब्याज डबल गर्नु हो।
के हुन्छ यदि तपाइँको छेउको अर्को खेलाडीले अचानक डबल डाउन खेल्ने अपेक्षा गरेन किनकि उसले १० कार्डलाई धेरै शक्तिशाली देख्दछ? उदाहरण को लागी खेलाडी अचानक निर्णय, भन्न को लागी, तर कम को लागी डबल गर्न को लागी प्रबंधन र आफ्नो दुई रातो चिप्स, प्रत्येक moves at मा मा सार्दछ। यदि यो मामला हो भने, त्यसो भए तपाईले गर्न सक्नुहुने हातसँग कुराकानी गर्नु हो त्यसैले तपाईले केहि फाइदाहरू पनि प्राप्त गर्न सक्दछौं।
रेन्जेका अनुसार तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त्यो अरू दुई रेड चिपहरू त्यस खेलाडीलाई टस गर्न र उसलाई सूचित गर्नुहोस् कि तपाईले उसलाई डबल डाउन पूरा गर्न भुक्तान गर्न मद्दत गर्नुहुनेछ। यो रणनीति खेल्दै, तपाईं प्लेयरले तपाईंको प्रस्ताव लिनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै हुनुहुन्छ। धेरै क्यासिनोहरूमा, प्राय: खेलाडीहरूले यो संकेत लिन्छन्।
त्यसोभए के गर्ने कारण छ? तपाइँको छेउमा खेलाडी एक डबल डाउन संग सम्बन्धित प्रस्ताव को फाइदा लिन चाहँदैन किनकी, यो राम्रो छ कि तपाइँ यस मा भाग लिनुहोस्। यदि यो जित्यो भने, तपाईको दांव (£ १०) ले अतिरिक्त १० पाउनेछ जुन तपाईको पालो नभए पनि स्पष्ट रुपमा राम्रो चाल हो!
ब्ल्याकजेक खेलमा भाग लिँदा, तपाईंको दायाँको खेलाडीले £ २age फिर्ता गर्‍यो र ब्ल्याकजेक दिइयो, र व्यापारीको पोष्टकार्ड एक ऐस हो। यस परिस्थितिमा, खेलाडीसँग एक ‘समान पैसा’ को लागि अनुरोध गर्ने अधिकार छ, जसको अर्थ हो कि उसले ब्ल्याकज्याकको लागि पनि पैसा प्राप्त गर्न सक्छ, डीलरको हातको कुल मूल्यलाई ध्यान नदिई।
पैसामा पनि जूवा खेल्ने कामलाई ठूलो चाल ठानिदैन जबसम्म तपाईं कार्डहरू गन्नुहुन्न जुन डेकबाट बाहिर जान्छ। तर धेरै खेलाडीहरूको लागि पैसा पनि रिसोर्ट गर्नु राम्रो सम्झौता हो किनकि त्यहाँ केही आश्वासन छ कि उनीहरूले केहि प्राप्त गर्नेछन्।
रेन्जीको लागि, यस परिदृश्यको उत्तम चाल भनेको भनेको यो हो कि तपाईलाई डिलरको लाठी छैन भन्ने लाग्दैन, र तपाई पैसाको लागि पनि खेलाडीको हात किन्न इच्छुक हुनुहुन्छ। यो भन्नुभए पछि, तपाईले आफ्नो सीटमेट चिप्स उस्को माथि उठाउनु भएको रकम बराबर टस गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को खेलाडी खुशी भएर खुशी हुनेछ कि उसले आफ्नो ब्याज फिर्ता पायो र अर्को पैसा ब्ल्याकज्याकको लागि लाभको रूपमा।
यस परिदृश्यमा, अब तपाईसँग हात छ, र तपाईले डिलरबाट १. times गुणा दम भुक्तानी गर्न सक्नुहुनेछ यदि उसले ब्ल्याकजेक समातेको छैन वा यदि यो ब्ल्याकज्याक छ भने यो सबै गुमाउँछ। यो एक बन्द चाल जस्तो देखिन सक्छ, तर लामो समय मा, यो एक आकर्षक चाल को रूप मा अन्त हुनेछ किनकि तपाईं 3-2 बाधा मा पुरस्कृत हुनेछ।
संक्षिप्तमा, यसले तपाईंको कारणलाई मद्दत गर्दछ यदि तपाईं आफ्नो आधारभूत रणनीतिहरू अन्तर्क्रियाको साथ मिलाउन सक्नुहुनेछ। यसले तपाईंलाई फाइदा लिन र घरको किनारा कम गर्न मद्दत गर्दछ।
के तपाईंलाई थाहा छ यदि तपाईं क्यासिनोमा मूल्या rated्कन गर्न र कम्पासको लागि सोध्न सक्नुहुन्छ भने तपाईं घरको किनारा पनि कम गर्न सक्नुहुन्छ? क्यासिनो भाषामा, ‘कम्प्स’ मानार्थको लागि एक छोटो छ, र यसले क्यासिनोको लगातार खेलाडीहरूलाई दिइने भत्ताहरूको रूपमा काम गर्दछ।
त्यसो भए कम्पासहरू के हुन् र जब यी क्यासिनोका सदस्यहरू हुन्छन् तब यी सुविधाहरूले कसरी मद्दत गर्न सक्दछन्? खैर, क्यासिनोमा संकलित कम्पास पोइन्टहरू बुफेको आनन्द लिन, होटेलको कोठामा बस्ने वा एयरफेयर कभर गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। र यदि तपाईं ब्ल्याकजेक खेल्नुहुन्छ भने, तपाईंको अधिक कम्पास पोइन्टहरू कमाउने सम्भावनाहरू बढ्छ, र यी स these्कलन बिन्दुहरू घरको किनारा कम गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यस रणनीतिको बारेमा बढि जान्न इच्छुक हुनुहुन्छ? पढ्नुहोस्, र कसरी तपाईं क्यासिनो कम्पासको फाइदा लिन सक्नुहुन्छ पत्ता लगाउनुहोस्।
पोइन्टहरू संकलन गर्न सुरू गर्न र स्वीकार गर्न यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले प्लेयरको कार्डको लागि पहिले साइन अप गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। तपाईं यो प्लेयर क्लब भ्रमण गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै क्यासिनोहरूमा, सदस्यता को लागी आवेदन अनलाइन पूरा गर्न सकिन्छ। यो नि: शुल्क हो, र यो प्रस्ताव को फाइदा लिन चाहने जो कोहीलाई उपलब्ध छ।
जब तपाईं ब्ल्याकज्याक जस्तो क्यासिनो खेल पहिलो पटक खेल्नुहुन्छ, तपाईंले डिलरलाई कार्ड स्लाइड गर्नु पर्छ। कार्ड प्राप्त गरेपछि, डिलरले तपाईंको प्लेयर जानकारी रेकर्ड बुकमा रेकर्ड गर्दछ वा तपाईंको जानकारी अनलाइन अपडेट गरेर। एक पटक तपाइँले तपाइँको खेल सुरू गरेपछि, क्यासिनो पर्यवेक्षक वा प्रभारी ब्यक्तिले तालिकामा तपाइँको व्यवहारलाई निरन्तर जाँच गर्दछ, तपाईले बनाउनु भएको दांवलाई ध्यान दिएर।
तपाइँको सट्टेबाजी ईतिहास, तपाइँले बनाउनुभएको बेटको संख्या र ब्ल्याकज्याक तालिकामा बितेको समयको नोट लिनु यो इन्चार्जको काम हो। तपाईंले कमाउनुहुने पोइन्ट्स संख्या तिनीहरूको अवलोकनमा निर्भर हुनेछ।
अभ्यासको कुराको रूपमा, यो राम्रो हो कि तपाईले आफ्नो खेल पूरा गरेपछि पर्यवेक्षकलाई तपाईंको कम्पास पोइन्टहरूको बारेमा सोध्नुहोस्। जब तपाइँले सोध्नुहुन्छ, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ राम्रो र मैत्री तरीकाले सोध्नु भएको छ। तपाईंले राम्रो भोजन रेस्टुरेन्टमा खाना खानु पर्छ भन्ने अपेक्षा गर्नुहुन्न यदि यदि तपाईको बेट्स टेबलमा केही £ ch चिपहरू छन्।
क्यासिनोले तपाईंलाई दिनुहुने पोइन्ट्सको संख्या तपाई क्यासिनोमा ल्याउने मानमा निर्भर गर्दछ। संक्षेपमा भन्नुपर्दा, क्यासिनोको काम तपाईंको मूल्यको गणना गर्न हो, तपाईंले ल्याउनुहुने बेट्सको संख्या र ब्ल्याकज्याक तालिकामा बिताउने समयको आधारमा।
उदाहरणको लागि भन्नुहोस् तपाईको मानक शर्त १०० डलर हो (तपाई एक अनुभवी वीआईपी हुनुहुन्छ) र तपाई hours घण्टा खेल्दै हुनुहुन्छ, र मानौं कि तपाईलाई प्रति घण्टा १०० हात दिइन्छ। यसको मतलव तपाईको क्यासिनो भ्रमणमा शर्त लगाउनु हुनेछ।
१०० हात x £ १०० प्रति हात x hours घण्टा = £ ,000०,०००
तिनीहरूको काल्पनिक राशि प्रयोग गरेर, एक औसत क्यासिनो निम्न सूत्रहरू प्रयोग गरेर तपाईंको पोइन्टहरूको गणना गर्दछ:
कार्य x घर लाभ = प्लेयरको सैद्धांतिक नोक्सान
क्यासिनो पर्यवेक्षकहरू र प्रबन्धकहरूको लागि यो नियमित रूपमा तपाईंको खेलको अवलोकन गर्न असम्भव भएकोले, व्यवस्थापनले खेल खेल्न रोज्ने खेलाडीहरू भन्दा २ प्रतिशत फाइदा लिनेछ। यसले यो पनि मान्दछ कि कालोज्याक खेल्ने खेलाडीहरु मध्ये धेरै जना त्यस्तो अनुभवी छैनन्, कम्तिमा खेलमा सबैभन्दा जटिल रणनीति प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा। त्यसो भए माथि दिइएका सूत्र प्रयोग गरेर:
कार्यमा £ 50,000 x2प्रतिशत घर-लाभ = £ 1,000 प्लेयरको लागि सैद्धांतिक नोक्सान
माथिको सूत्र प्रयोग गरेर, क्यासिनोले उनीहरूको लागि तपाईंको मूल्य लगभग £ १,००० छ भनेर सिक्नेछ। अब, धेरै क्यासिनोहरूले छूट प्रदान गर्दछ जुन प्राय २० प्रतिशत देखि 40० प्रतिशत सम्म हुन्छ। यो मान्दै क्यासिनोले त्यसपछि २० प्रतिशत छुट दिने छ:
प्लेयर x २० प्रतिशत छूट = £ २०० को लागि £ १,००० सैद्धांतिक नोक्सान
यसको मतलव क्यासिनोले ates २०० सम्म छुट वा कम्पाइन्ट पोइन्टमा प्रस्ताव गर्न सक्दछ। संक्षिप्तमा, तपाईं क्यासिनोको यस मैत्री प्रस्तावको फाइदा लिन सक्नुहुन्छ, र तिनीहरूले अनुमान गरे कि तपाईंले कार्यमा २ प्रतिशत जति गुमाउनुहुनेछ। अब, यदि तपाइँ एक अनुभवी खेलाडी हुनुहुन्छ र खेल कसरी जान्ने जान्नुहुन्छ भने, निश्चित रूपमा तपाइँ अफरहरूको फाइदा लिन सक्नुहुन्छ र थप जित्न सक्नुहुन्छ।
खेलाडीहरूको लागि कम्पासको उपलब्धता एक उत्तम प्रस्ताव हो जसले बैंकरोललाई बढावा दिन सक्छ। तर तपाईं तलका सल्लाहहरूमा ध्यान दिएर तपाईंको संभावना बढाउन सक्नुहुन्छ:
क्यासिनो मान्दछ कि एक औसत खेलाडी प्रति घण्टा १०० हात खेल्छ। यसको मतलब यो होइन कि तपाईं यो गतिमा खेल्नुहुनेछ। यदि तपाईं प्रस्तावहरूको फाइदा लिन चाहानुहुन्छ भने, उत्तम छ तपाईं यसलाई सुस्त लिनुहोस्, र क्यासिनोमा तपाईंको समयको मजा लिनुहोस्।
केही खेलाडीहरूसँग टेबलमा खेल्नुको सट्टा तपाईलाई व्यस्त र भीडभाड ब्ल्याकजेक टेबुलहरूमा खेल्न सिफारिस गरिन्छ। यो पनि महत्त्वपूर्ण छ कि खेल खेल्दा तपाईं आफ्नो निर्णयहरूमा हतार गर्नुहुन्न। यदि तपाईं एक राम्रो क्यासिनो रिसोर्टमा खेल्दै हुनुहुन्छ भने, क्यासिनो टेबुलमा तपाइँको सबै समय खर्च नगर्नुहोस्।
यदि सम्भव छ भने, टेबुलमा फर्कनु भन्दा पहिले केहि विश्राम लिनुहोस्। यहाँ कुरा भनेको खेललाई ढिलो लिनु हो र एक घण्टा १०० हात खेल्नुको सट्टा, to० देखि 60० हातहरू प्रयास गर्नुहोस्। यदि तपाईंले खेल्ने हातहरू कम गर्नुभयो भने, तपाईंले आफ्ना अपेक्षित घाटाहरू कम गर्न सक्नुहुन्छ।
अभ्यासको कुराको रूपमा, क्यासिनो पर्यवेक्षकले तपाईं टेबलमा बनाउने पहिलो शर्तको नोट लिनुहुनेछ। किनभने आँखा तपाईंको पहिलो शर्त मा छन्, यो एक उच्च रकम शर्त तपाईंको फाइदाको लागि छ, advantage 30 सामान्य £ 10 को सट्टामा भन्नुहोस्। यो तपाईंको पक्षमा रेकर्ड हुनेछ, र यसले क्यासिनोको आँखामा तपाईंको मूल्य बढावा दिन्छ।
तपाईंले टेबलमा आफ्नो खेल पूरा गरिसकेपछि, यो उत्तम हो कि तपाईंले क्यासिनो सुपरवाइजरलाई दिन चाहानुहुन्छ, तपाईंले बनाउनुभएको औसत शर्तमा आधारित मूल्या know्कन जान्न। यदि सुपरवाइजरले तपाइँलाई भन्छ कि तपाइँको औसत शर्त १० डलर हो भने, तपाइँ भन्न सक्नुहुन्छ कि तपाइँको बेट्स फरक छ, £ १० देखि £ from० सम्म वा जे पनि तपाइँको उच्च शर्त थियो।
नीति को मामला को रूप मा, सुपरभाइजरहरु र प्रबन्धकहरु खेलाडी अपमान गर्न चाहँदैन त्यसैले निश्चित रुपमा रेकर्ड गरिएको औसत बृद्धि गर्न आवश्यक समायोजन गर्छन्। यदि तपाइँको बेटिंग औसत बढाइएको छ भने, यसले तपाइँको मानलाई पनि बढाउनेछ जुन बदले कम्पासलाई बढावा दिन्छ।
क्यासिनोहरू क्यासिनो कुपनहरू पनि प्रख्यात छन्, र यिनीहरू केवल एक शर्तको लागि पनि खेल खेल्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यहाँ क्यासिनो कूपनका विभिन्न प्रकारहरू छन्, र केहि सबैभन्दा लोकप्रियहरू तल छलफल गरिएको छ:
कूपनको सट्टा, खेलाडीहरूलाई प्रोमोसनल चिपले पुरस्कृत गर्न सकिन्छ। यो चिप बिभिन्न कारणहरूको लागि दिइन्छ, प्राय: क्यासिनोमा खेल्ने खेलाडीहरूलाई। मार्केटिंग उपकरणको रूपमा, प्रोमो चिप खेल खेल्न प्रयोग गर्न सकिन्छ सामान्य क्यासिनो चिप वा टोकनको सट्टा।
स्थानमा चिप थिचेर पछि, डिलरले शर्तको नोट लिनेछ र टेबलबाट चिप हटाउनेछ। यदि खेलाडी यस राउन्डमा जीत गर्छ भने, डिलरले नियमित क्यासिनो चिप्स प्रयोग गरेर जीतलाई भुक्तान गर्नेछ।
अब, यदि प्लेयरको हात हरायो भने, प्रोमो चिप टेबलबाट हटाइन्छ, र प्लेयरले केही पनि समाप्त गर्दैन। टाईको मामलामा, प्लेयरले सामान्य रूपमा प्रोमो चिपको स्वामित्व कायम गर्दछ, र यसलाई अर्को राउन्ड खेल्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब, यदि खेलाडीले हात डबल वा बिभाजित गर्न चाहन्छ भने, उसले क्यासिनोमा नियमित चिप्स वा टोकनहरू प्रयोग गर्नुपर्दछ।
खेलाडीहरूले क्यासिनोबाट म्याचप्ले कुपनहरू पनि प्राप्त गर्न सक्दछन्। यो खेलाडीका लागि क्यासिनोद्वारा बनाइएको एक दांव हो। उदाहरण को लागी, तपाइँ टेबुल मा मैचप्ले कूपनको साथ £ १० चिप राख्नुहुन्छ। यदि तपाईं हातले जित्न सफल हुनुभयो भने, तपाईंलाई क्यासिनो चिपको लागि डबल £ १० र म्याचप्ले कुपनको प्रयोगको लागि another १० यदि तपाइँ हराउनुहुन्छ भने, तपाइँ केवल आफ्नै तरिकाबाट ways १० लाई भाग दिनुहुनेछ।
म्याचप्ले कुपन एक पटक मात्र सम्बन्धको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ जुन तपाईंलाई दोस्रो पटक कुपन खेल्न अनुमति दिन्छ। एक पटक कुपन प्रयोग गरिसकेपछि कुपन टेबलबाट हटाइनेछ। दिमागमा राख्नुहोस् कि जब तपाइँ हात विभाजन गर्न वा डबल डाउन गर्न चाहानुहुन्छ, तपाइँ केवल तपाइँको शर्त प्रयोग गरेर यो गर्न सक्नुहुनेछ।
साथै कुपनको मान अनुहार मूल्यको .2 46.२ प्रतिशत छ। त्यसैले यदि तपाईंसँग कूपनको £ १०० मूल्य छ भने, यसको मूल्य £ …२० बराबर छ।
यस रणनीति क्यासिनोसँग कुराकानीको लागि कल गर्दछ ताकि तपाईं आफ्नो घाटाको एक अंश स collect्कलन गर्न सक्नुहुनेछ र प्रक्रियामा घरको किनारा कम गर्नुहोस्। यो दृष्टिकोण मुख्यत: वीआईपीहरू र नियमित खेलाडीहरू द्वारा अभ्यास गरिन्छ किनकि यसले ठूलो मात्रामा समावेश गर्दछ, र क्यासिनो अपरेटरहरू उनीहरूका लागि मूल्यवान खेलाडीहरूसँग बढी मिलनसार हुन्छन्।
यो एक रणनीति हो जुन VIPs द्वारा उत्तम रूपमा प्रयोग गरिन्छ र औसत खेलाडीहरू वा शुरुवातकर्ताहरूको लागि काम नगर्न सक्छ। यदि तपाईंलाई लाग्छ कि तपाईंले क्यासिनोमा धेरै खेल्नुभएको छ र अब तपाईं तिनीहरूको लागि ‘मूल्यवान’ हुनुहुन्छ भने, सायद तपाईं घरको किनारा घटाउन यो विकल्प अन्वेषण गर्न सक्नुहुन्छ।
परम्परागत ब्ल्याकजेक रणनीतिलाई खेलाडीहरूले हातको कुल मूल्य थाहा पाउनु पर्छ
यद्यपि यो रणनीतिले काम गर्दछ, तपाईं अझै पनि तपाईंको निर्णय कलमा सटीक भएर तपाईंको संभावनाहरूलाई बढावा दिन सक्नुहुन्छ
एउटा विशिष्ट रणनीति भनेको हातको रचना थाहा पाउनु हो
हात अन्तर्क्रिया अर्को परीक्षण रणनीति हो जुन घरको किनारा घटाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ
हात अन्तर्क्रिया दृष्टिकोण डरलाग्दो खेलाडीका लागि काम गर्ने छैन किनकि यसका लागि टेबलमा अन्य खेलाडीहरूसँग सहकार्य आवश्यक पर्दछ
क्यासिनो कम्पासले पनि तपाईंको पक्षमा क्यासिनो किनारा कम गर्नमा काम गर्दछ
क्यासिनोमा संकलित पोइन्टहरू नि: शुल्क टिकट र विमान किरायाको मजा लिन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ
क्यासिनो कुपनहरू र चिपहरू क्यासिनो पर्कहरू हुन् जुन टेबुलमा खेल्न प्रयोग गर्न सकिन्छ
कुपनहरू र चिपहरू एक पटक प्रयोग गर्न सकिन्छ, र डबलिंग वा स्प्लिट हुँदा प्रयोग गर्न सकिँदैन